Ukwandiswa lokushisa, ezidabukile umzimba, impilo ebuthaka - lezi zimpawu zaziwa cishe wonke umuntu bona ukuthi kunenkinga emzimbeni, khona yigciwane. Ngezinye izikhathi kunzima ukunquma ukuthi umzimba okubangwa isifo, nokuthi kufanele aphathwe ngemithi elwa namagciwane. • Ukuchaza ukukhethwa yokwelapha kuzosiza isivivinyo nodokotela amaprotheni C-esisheshayo. Norm kubantu okunempilo 0-5 mg / l. Hlobo luni ukuhlaziywa, nawu umbuzo ezigulini, kanye njengoba kufakazelwa ukwanda yayo?
amaprotheni C-esisheshayo libhekisela glycoproteins ekhiqizwa isibindi ngaphansi ezahlukene umonakalo izicubu, izimila, ukuvuvukala, ukusha, necrosis. Emzimbeni, ke angaqala ukuzivikela komzimba, ugqugquzela esibophezelayo yezingxenye ngazinye izilokazane ezincane, izinhlayiya kwezicubu ubuthi. Ngenxa yalokho, sabakhuthaza phagocytosis izinqubo, imikhiqizo eyingozi isuswa umzimba. Futhi amaprotheni bangathonya umsebenzi nezinye izakhi kumiswa igazi - leukocyte, izinhlayiya zegazi phagocytes.
Ukwandiswa amaprotheni C-esisheshayo egazini nhlobo izinqubo ukuvuvukala, izifo oyingozi futhi ezingalapheki, izifo yisinanakazana, isifo sofuba, izimila. Kakade 4-6 amahora ngemva umonakalo izicubu liyophuma futhi ifinyelela inani layo esiphezulu zingakapheli izinsuku kuya kwemithathu. Inkomba akuyona ethize kunoma esifweni esithile, izimiso zayo okusezingeni eliphezulu ibonisa umsebenzi ukuvuvukala ngesikhathi esifundweni. Ukuze inkambo zokuqapha isifo kuyadingeka ukulawula ezingeni CRP, ukunciphisa yayo likhomba ekusiza ukuvuvukala ngcono isimo lesiguli, ngokuvamile kwenzeka ezinsukwini 6-10 ngemuva kokuqala ukwelashwa.
Uma lokuhlushwa amaprotheni inyuka ostrovospalitelnogo Cishe, ukwelashwa engalethi umphumela oyifunayo. Lapho ukuvuvukala, sepsis, i-rheumatoid arthritis, necrosis pancreatic, esivimba amanzi infarct izinga ukwenyuka amashumi ngisho namakhulu izikhathi, futhi ingafinyelela 400 mg / l.
Igazi CRP esetshenziselwa uphethwe umehluko izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane. Ngakho, ama-ejenti webhaktheriya ezithathelwanayo kakhulu anda C amaprotheni esisheshayo. Norma usegazini (noma ukwanda kancane) lisikisela ukuthi ejenti causative - igciwane noma spirochete.
Esikhathini esiyiminyaka nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa, ikakhulukazi emva kokuhlinzwa ezinzima, ukwanda CRP, kodwa ukuhlaziywa ngokushesha kuza emuva evamile ngokungabi bikho izinkinga. Uma Nokho, wajoyina izifo ezibangelwa amagciwane, jova kwenqatshwa kwenzeka, amaprotheni uzobe landa kakhulu.
CRP e izifo zenhliziyo nemithambo yegazi
Ukuhlaziywa ukunquma yini ebangela ubuhlungu enhliziyweni. Uma isilethikusebenza wabonakala, izinga lu- yanda, ngoba Ngoba kunesithembiso izicubu necrosis. izinombolo Ephakeme CRP e unhlangothi esivimba amanzi futhi cerebral abonisa Izibikezelo abampofu. Uma isiguli uphathwe ngendlela acute ngokuhlasela pectoris angina, ekucubunguleni, uzobona ukuthi C amaprotheni esisheshayo - kuyinsakavukela.
Kanye cholesterol kanye ongaphakeme-ukuminyana liproproteinami, CRP kungase kubonise atherosclerosis semithambo kanye ingozi yezinkinga semithambo.
Kwezinye izimo, amaprotheni C-esisheshayo - kuyinsakavukela?
In the ukungabikho inqubo esebenzayo ukuvuvukala kule ingxenye umzimba uhla evamile. Ukuncishiswa CRP emazingeni evamile kungase kubonise ukuthi isifo isidlulile ku esigabeni okungamahlalakhona okubi kakhulu yenqubo engekho noma isiguli waya isichibiyelo.
Yini benze dimples phezu ephansi emuva
RH isici: Oluvumelana. RH ukungqubuzana sokukhulelwa
Art. 687 we Code Civil. Ukunqanyulwa kwe-ilungelo lokuhlala kuwo isivumelwano yokuhlala
Hemorrhoids grade 2: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa. Amakhandlela Bheka kusukela hemorrhoids ezishibhile futhi ngempumelelo
Indlela Yokwenza Imali phezu Vkontakte iqembu?
Ukwelashwa nokuvikelwa esiswini amakhambi umdlavuza abantu futhi phesheya
"Belojar": uhlelo umzimba, ukubuyekezwa
Lilit Oganesyan: Biography kanye nempilo yakho
Thenga vs Social Networks Online
Turkey, Kusadasi. Ukubuyekeza, izinkambo namanani